အာရ်မာ ဟာရီကိန်းကြောင့် ကျူးဘားကနေ အန်တီဂွာအထိ နာလန်ထဖို့ ခက်ခဲ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး အာရ်မာ ဟာရီကိန်းကြောင့် ကျူးဘားကနေ အန်တီဂွာအထိ နာလန်ထဖို့ ခက်ခဲ
epa06197193 People observe the damage after the pass of the Irma hurricane in Havana, Cuba, on 10 September 2017. Severe storm surge flooding cut power and forced the evacuation of thousands of people in the aftermath of Hurricane Irma. EPA/Ernesto Mastrascusa
အာရ်မာ ဟာရီကိန်းကြောင့် ကျူးဘားကနေ အန်တီဂွာအထိ နာလန်ထဖို့ ခက်ခဲ
ကျူးဘားကနေ အန်တီဂွာနိုင်ငံအထိ ကရစ်ဘီယန် ကျွန်းနိုင်ငံတွေဟာ ပြင်းထန်တဲ့ အာရ်မာ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကြောင့် လူသေဆုံးမှု၊ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှု၊ ကစဉ်းကလျားဖြစ်မှုတွေ အကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို အားပြုရတဲ့ အဲဒီဒေသတွေဟာ ပြန်လည် ထူထောင်နိုင်ဖို့ နှစ်နဲ့ချီပြီး ကြိုးပမ်းကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သတ်မှတ်ချက် အဆင့် ၅ ရှိတဲ့ အာရ်မာ မုန်တိုင်းကြောင့် ဒေသတလွှား အနည်းဆုံး ၂၈ ဦး သေဆုံးပြီး တချို့ကျွန်းငယ်တွေဟာ ကမ္ဘာနဲ့ အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်လုနီးပါး ဖြစ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
လီဝါ့ဒ်ကျွန်းတွေကနေ ပွာတိုရီကိုနဲ့ ဟစ်ပန်နီယိုလာကို ဖြတ်၊ ကျူးဘားကို ဝင်ပြီး ဖလော်ရီဒါအထိ ရောက်ခဲ့တဲ့ အာရ်မာ မုန်တိုင်းဟာ မွေးမြူရေးလုပ်ထားတဲ့ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်တွေကို သေစေခဲ့ပြီး၊ ကားတွေကိုလည်း ပျက်စီးစေကာ အဆောက်အအုံတွေကိုလည်း အမိုးတွေလန်ကာ ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။
ကျူးဘားနိုင်ငံမြို့တော် ဟာဗားနားက ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေမှာ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့က ရေလှိုင်းတွေဟာ ၁၁ မီတာ အမြင့်အထိ လှိမ့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေကြားမှာ ကျော်ကြားတဲ့ ဗာရာဒေရိုမှာ လေပြင်းတွေကျခဲ့ပါတယ်။ ဟာဗားနားမှာ ပင်လယ်အနီးက ဟိုတယ်တွေကနေ လူတွေကို ကယ်ထုတ်ခဲ့ရပြီး နေအိမ်တွေက လူတွေကိုလည်း ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားတွေက ကူညီကယ်ဆယ်ခဲ့ရပါတယ်။
အမေရိကန်ပိုင် ဗာဂျင်ကျွန်းစုတွေမှာလည်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိလို့ သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ဖက်ဒရယ်ရန်ပုံငွေတွေ တိုးချပေးဖို့ လုပ်နေပါတယ်။ ကရစ်ဘီယန် ပင်လယ်ထဲက ဒတ်ခ်ျပိုင် စိန့်မာတင်နဲ့ ဘာဘူဒါ ကျွန်းတွေမှာလည်း အနည်းဆုံး ၄ ဦးသေပြီး အိမ်ခြေအဆောက်အအုံ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ အကြီးအကျယ် ပျက်စီးထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
အာရျမာ ဟာရီကိနျးကွောငျ့ ကြူးဘားကနေ အနျတီဂှာအထိ နာလနျထဖို့ ခကျခဲ
ကြူးဘားကနေ အနျတီဂှာနိုငျငံအထိ ကရဈဘီယနျ ကြှနျးနိုငျငံတှဟော ပွငျးထနျတဲ့ အာရျမာ ဟာရီကိနျးမုနျတိုငျးကွောငျ့ လူသဆေုံးမှု၊ ပကျြဆီးဆုံးရှုံးမှု၊ ကစဉျးကလြားဖွဈမှုတှေ အကွီးအကယျြဖွဈခဲ့ပွီး ခရီးသှားလုပျငနျးကို အားပွုရတဲ့ အဲဒီဒသေတှဟော ပွနျလညျထူထောငျနိုငျဖို့ နှဈနဲ့ခြီပွီး ကွိုးပမျးကွရမှာ ဖွဈပါတယျ။
သတျမှတျခကျြ အဆငျ့ ၅ ရှိတဲ့ အာရျမာ မုနျတိုငျးကွောငျ့ ဒသေတလှား အနညျးဆုံး ၂၈ ဦး သဆေုံးပွီး တခြို့ကြှနျးငယျတှဟော ကမ်ဘာနဲ့ အဆကျအသှယျ ပွတျတောကျလုနီးပါး ဖွဈကနျြခဲ့ပါတယျ။
လီဝါ့ဒျကြှနျးတှကေနေ ပှာတိုရီကိုနဲ့ ဟဈပနျနီယိုလာကို ဖွတျ၊ ကြူးဘားကို ဝငျပွီး ဖလျောရီဒါအထိ ရောကျခဲ့တဲ့ အာရျမာ မုနျတိုငျးဟာ မှေးမွူရေးလုပျထားတဲ့ ကြှဲ၊ နှား၊ ကွကျ၊ ဝကျတှကေို သစေခေဲ့ပွီး၊ ကားတှကေိုလညျး ပကျြစီးစကော အဆောကျအအုံတှကေိုလညျး အမိုးတှလေနျကာ ပကျြစီးစခေဲ့ပါတယျ။
ကြူးဘားနိုငျငံမွို့တျော ဟာဗားနားက ပငျလယျကမျးခွတှေမှော စကျတငျဘာ ၁၀ ရကျနကေ့ ရလှေိုငျးတှဟော ၁၁ မီတာ အမွငျ့အထိ လှိမျ့တကျလာခဲ့ပါတယျ။ ကမ်ဘာလှညျ့ခရီးသှားတှကွေားမှာ ကြျောကွားတဲ့ ဗာရာဒရေိုမှာ လပွေငျးတှကေခြဲ့ပါတယျ။ ဟာဗားနားမှာ ပငျလယျအနီးက ဟိုတယျတှကေနေ လူတှကေို ကယျထုတျခဲ့ရပွီး နအေိမျတှကေ လူတှကေိုလညျး ကယျဆယျရေး လုပျသားတှကေ ကူညီကယျဆယျခဲ့ရပါတယျ။
အမရေိကနျပိုငျ ဗာဂငျြကြှနျးစုတှမှောလညျး ပကျြစီးဆုံးရှုံးမှုတှရှေိလို့ သမ်မတ ဒျေါနယျထရမျ့က ဖကျဒရယျရနျပုံငှတှေေ တိုးခပြေးဖို့ လုပျနပေါတယျ။ ကရဈဘီယနျ ပငျလယျထဲက ဒတျချြပိုငျ စိနျ့မာတငျနဲ့ ဘာဘူဒါ ကြှနျးတှမှောလညျး အနညျးဆုံး ၄ ဦးသပွေီး အိမျခွအေဆောကျအအုံ ၇၀ ရာခိုငျနှုနျးအထိ အကွီးအကယျြ ပကျြစီးထိခိုကျခဲ့ပါတယျ။
Previous articleချမ်းမြသုခပရဟိတအသင်းက အသင်းပိုင်ငွေကြေးသုံးစွဲမှုတွေကို စစ်ဆေးသွားမယ် (ရုပ်/သံ)
Next articleရခိုင်မတည်ငြိမ်မှုအတွက် မွတ်စလင် အကြမ်းသမားတွေကို တရုတ်သံအမတ် အပြစ်တင်